पहिलो चरणको मत गणना हुँदै गर्दा दलहरु यस्ता देखिए | PaniPhoto
पहिलो चरणको मत गणना हुँदै गर्दा दलहरु यस्ता देखिए
paniphoto / May 18, 2017 / No Comments
पहिलो चरण निर्वाचनको मतगणना निकै नै सुस्त भइरहेको छ यद्यपि यो अवधिमा देखिएका नतिजाहरुले केहि चरित्र भने देखाएका छन् । दलहरुले सोचे जस्तो र सामाजिक सञ्जालमा देखिए भन्दा भिन्न जनमत रहेको अवस्था भने यसले देखाएको छ ।
सामाजिक सञ्जालमा र अन्यत्र दलका नेता तथा तिनका कार्यकर्ता, समर्थकहरुको मनोविज्ञान र गतिबिधिले भिन्न अवस्थाको चित्रण गरेको थियो जसलाई पहिलो चरणको निर्वाचनको आधा भन्दा बढि भएको मतगणनाले झन्डै उल्टाइदिएको छ ।
कुनै पनि दलहरुले अनुमान गरे जस्तो परिणाम देखाइरहेका छैनन् । कुनै दलमा नतिजाले उत्साह देखाएको छ भने कोही निराश भएका छन् । पार्टीगतरुपमा केहि पार्टीको अवस्था यस्तो देखिएको छ :
नेपाली कांग्रेस : जसो गरे पनि फरक पर्दैन
कांग्रेसले सोचे भन्दा निकै राम्रो नतिजा ल्यायो । विगत केहि समय यता गल्ति माथि गल्ति गर्ने नेतृत्व, सांगठनिक निष्क्रियता र पुरातन प्रचार प्रसार कांग्रेसको विशेषता जस्तै भएको छ तर जस्तो जे अवस्था भए पनि उसलाई केहि फरक नपर्ने रहेछ । जुनसुकै अवस्थामा पनि आफ्नो मत सुरक्षित देखेर कांग्रेसका नेताहरुलाई हाइसञ्चो बनाएको छ । कार्यकर्तामा पनि आत्मविश्वास बढेको छ । अहिले सम्म मेयर, उपमेयर र वडा अध्यक्षमा दोस्रो धेरै नतिजा ल्याएको छ । एमाले भन्दा केहि कम मात्रै पदहरुमा यसले जितेको छ ।
एमाले : सोचे जस्तो राम्रो भएन
एमालेको राष्ट्रवादको नारा र ओलीको सपना राम्रो चलिरहेको अवस्था हो अहिले । मदन भण्डारीको मृत्यु पछि आममान्छेको एमाले प्रति जुन सहानुभुति थियो, लगभग त्यसैको हाराहारीमा अहिले केहि समय यता समर्थन पनि रहेको जस्तो देखिन्थ्यो । प्रचार प्रसारमा पनि एमालेको निकै खर्चिलो, चुस्त र रचनात्मक थियो । उसको प्रचार प्रसार र गतिबिधीले यसपटक चै एमालेले अचम्मै धेरै नतिजाले ल्याउँछ भन्ने धेरैको अनुमान थियो । यसमै आधारित भएर ‘कांग्रेस हाफ र माओवादी पत्तासाफ’ भन्ने नारा नै बन्यो तर नतिजा एमालेले सोचे भन्दा साह्रै कम देखियो । पहिलो धेरै पद जित्ने पार्टी बने पनि ठुला पदहरुमा कांग्रेससँग उसको खासै लामो दुरी छैन भने वडा अध्यक्षमा माओवादी पनि लगभग सँगसँगै छ । यो नतिजाले कांग्रेस र माओवादीले कसरी यत्रो ल्याए भन्ने आश्चर्य एमालेका नेता कार्यकर्तामा देखिएको छ भने कांग्रेस र माओवादी पनि कम रहेनछन् भन्ने सोचाइ आमजनतामा देखिएको छ । यो आश्चर्यको उचित कारण बताउँन नसके दोस्रो चरण एमालेलाई भारी पर्न सक्छ ।
माओवादी केन्द्र – सोचे भन्दा राम्रो नतिजा
यो निर्वाचन माओवादीका लागि सबै भन्दा सफल रह्यो भन्दा हुन्छ । अहिले सम्म ३ वटा निर्वाचन भोगेको माओवादीले तिनवटा निर्वाचनमा नै फरक फरक चरित्र देख्नु पर्यो । संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनमा सोच्दै नसोचेको परिणाम आयो । दोस्रोमा हौस्सियो तर सांगठनिक निर्माणमा याद गरेन । नमज्जाले खुम्चियो । स्थानिय निर्वाचनमा लाजमर्दो हुन सक्छ भनेर ‘चुनाव गराउँनु नै जित्नु हो’ भन्न थालेको माओवादीका पक्षमा सोच्दै नसोचेको नतिजा देखियो । पहिलो चरणको अहिलेसम्मको नतिजाले माओवादीका नेता, कार्यकर्तामा निकै उत्साह थपेको छ । मेयर र उपमेयरमा कांग्रेस र एमाले भन्दा लगभग आधा नै कम भए पनि परिणाम उत्साहजनक देखिएको छ । वडा अध्यक्षमा उसले कांग्रेस र एमालेकै हाराहारीमा नतिजा निकालेको छ । यसबाट आँकलन गर्न सकिन्छ कि माओवादीका नेता कार्यकर्ताले आफ्नो जनाधारलाई पटक्कै बुझ्न सकेको देखिएन । तल्लो इकाइमा माओवादी स्वयम् आफुले सोचे जस्तो नराम्रो भइसकेको छैन । दोस्रो चरणमा मेयर, उपमेयरमा पनि गतिला उम्मेदवार उठाए थप मत पाउँन सक्ने देखिन्छ ।
राप्रपा – खोइ गाई ?
समानुपातिकमा निकै ठुलो मत पाएको र नयाँ पुराना राप्रपा एकता भएकाले राप्रपा राष्ट्रिय राजनीतिमा हावी हुने धेरैको अनुमान थियो । स्थानिय तहको निर्वाचनमा राप्रपाले माओवादीलाई सहजै पछार्ने र उस्तै परे कांग्रेसलाई सम्म उछिन्न सक्ने आंकलन गर्नेहरुको कमि थिएन तर नतिजाले राप्रपालाई छहराबाट खसालिदियो । अहिलेसम्म जम्मा एक ठाउँमा गाउँपालिका अध्यक्षमा जितेको राप्रपाले अन्य कतै पनि उल्लेखनिय उपस्थिती देखाउँन सकेन । राप्रपाको बलियो पकड रहेको भनिएको मकवानपुरमै पनि लज्जास्पदरुपमा हारिरहेको छ ।
नयाँ शक्ति भन्दा विवेकशील र साझा पार्टीको भविष्य उज्यालो
माओवादको धारले अब केहि गर्दैन भनेर नयाँ पार्टी खोलेका बाबुराम भट्टराईले चुनाव चिन्ह विवाद पछि संघिय समाजवादी फोरमसँग चुनावी एकता गर्दै चुनावमा सहभागी भए । अहिलेसम्म १ सिट जिते पनि अन्यत्र कतै पनि नयाँ शक्तिको उपस्थिती उल्लेख गर्न लायक देखिएन । बरु नयाँ शक्ति भन्दा विवेकशील र भर्खरै खुलेको साझा पार्टीप्रति मानिसहरुको चासो बढि देखियो ।
मुलुकको आधा भन्दा बढि ठाउँमा निर्वाचन गर्नै बाँकी रहेको र पहिलो चरणकै नतिजा आइ नसकेको स्थितीमा अहिले देखिएको दृष्य अन्तिम र पुर्ण परिणाम आइसक्दा सम्म फेरिन भने सक्छ ।
Posted in: सन्दर्भ बिशेष
© 1828 PaniPhoto. All rights reserved.